3GP ... MP3 လို သီချင်း Format တစ်ခုလို့ပဲထင်နေတာ။ တကယ်တော့ Mobile တွေမှာသုံးတဲ့ Video Format တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ Wiki မှာ ဒီလိုပြထားပါတယ်။
3GP isasimplified version of the MPEG-4 Part 14 (MP4) container format, designed to decrease storage and bandwidth requirements in order to accommodate mobile phones. It stores video streams as MPEG-4 Part2or H.263 or MPEG-4 Part 10 (AVC/H.264), and audio streams as AMR-NB or AAC-LC. A 3GP file is always big-endian, storing and transferring the most significant bytes first. It also contains descriptions of image sizes and bitrate.
- 3GPP (for GSM Based Phones, may have filename extension .3gp)
- 3GPP2 (for CDMA Based Phones, may have filename extension .3g2)
အဲဒီ Format အကြောင်း သိခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးလည်း နဲနဲပြောပြချင်သေးတယ်။ ဒီလိုဗျ ... မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ထူးဆန်းပြီး မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ Video လေးတစ်ခုကို သူ့ဖုန်းထဲမှာ ဖွင့်ပြတယ်။ မြင်မြင်ချင်း လူတောင်အံ့သြသွားတယ်။ ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားပေါ့။ အကြံအဖန် ထုထားတာတွေ နေမှာပါလို့ထင်နေတာ။ ဒါနဲ့သေချာအောင် ကွန်ပျူတာမှာ ပြန်ပြီး Checking လိုက်မယ်ဆိုပြီး သူ့ဖုန်း MemoryCard ကိုဖြုတ်၊ ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်ပြီးဖွင့်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ video format က .3gp ဖြစ်နေလို့ Winamp နှင့် WMP တို့ကလည်း မဖွင့်နိုင်ရှာဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာတော့ ImTOO 3GP Converter (+Key) လေးကို ရခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီ 3gp file လေးကို mpg format ပြောင်းပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော်ထင်ထားသလို လုပ်ကြံဖန်တီးထားတာ မဟုတ်ပဲ တကယ်ကို အမှန်အကန်တွေဖြစ်နေတယ်။ ရွှေမမတွေ ... တော်တော့်ကို ခေတ်မှီနေကြပြီပဲ။ အရှက်တရားလည်း မရှိကြတော့ဘူး [-(
ကိုမင်းကျော် 11:21 am
ဒီဗီယိုလေးရရင် ကြည့်ချင်တယ်။:) ;) ၊ ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့
CMS 3:51 pm
video download link ကို email ပို့လိုက်ပါမယ်
Pyih Phyoe Sett 3:52 am
i so interest. Pls share to me. thanks. :P
CMS 3:57 am
wt's ur mail
Pyih Phyoe Sett 4:18 am
About My Life ,My Feelings and Thoughts 4:59 pm
I am also interested in what you said.Plz send me video link to share me.:)
CMS 9:10 pm